Triptorelin Acetate ထိုး / အမှုန့် - ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ။ - Phcoker
ဇူလိုင်လ 23, 2019
1 ။ Triptorelin Acetate
2 ။ Triptorelin Acetate အဘို့အဘယ်သို့သုံးထားသလဲ?
3 ။ ဘယ်လို Triptorelin Acetate သင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလား
4 ။ အဘယ်သို့ငါ Triptorelin Acetate ကိုသုံးပါသင့်သလဲ
5 ။ သငျသညျအသုံးမပြုခင်ကဘာလဲသိကြသင့်သလဲ
6 ။ Triptorelin Acetate သောက်သုံးသော
7 ။ Triptorelin Acetate သုံးပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
8 ။ Triptorelin Acetate ညာဘက်အကြှနျုပျအဘို့ဖြစ်သနည်း
9 ။ ငါ Triptorelin Acetate ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ?
Triptorelin Acetate ကိုလည်း Triptorelin Acetate ဟုလည်းလူသိများသည်။ 140194-24-7 သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတုမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗဟိုနှင့်ကာဗွန်အက်တမ်၏အလယ်တန်းနှင့်အဆင့်မြင့်အစားထိုးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအော်ဂဲနစ်ဓာတုမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအက်တမ်။ အခြေခံအားဖြင့် 'Organic' ဟူသောဝေါဟာရအားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာမော်လီကျူးသည်အနုမြူဗုံးသည်ဗဟိုအက်တမ်အဖြစ်ရှိသည်။ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတိုင်းတွင်ကာဗွန်အက်တမ်၏တည်ရှိမှုနှင့်ကာဗွန်သည်သက်ရှိတို့၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
Triptorelin Acetate ကျယ်ပြန့်နေတဲ့မူးယစ်ဆေးအဖြစ်နှင့်လည်းဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဓာတုပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအတော်လေးအထူးကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အသုံးပြုမှုအများဆုံးအရေးပါပါတယ်။ အဆိုပါ Triptorelin Acetate ရစေရန်အက်ဆစ်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လက်ခံမှုနှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကအနည်းငယ် သာ. ကြီးမြတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အလှူရှင်မှုနှုန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာ C66H86N18O15 ၏ဓာတုဖော်မြူလာနှင့်မှဲ့နှုန်း 1311.49 ဂရမ်ပျမ်းမျှအနုမြူဗုံးအံအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဆေးရောင်းသူလည်းယေဘုယျအားဖြင့် Triptorelin Acetate, ဆိုလိုတာက gonapeptyl စသည်တို့ကို, decapeptyl အဖြစ်စည်းကမ်းချက်များကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Triptorelin Acetate အသုံးပြုမှု ယနေ့ခေတ်တွင်ထင်ရှားသောအချက်မှာဤဆေးသည်အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည် (လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏မျိုးပွားမှုစနစ်ရှိ endocrine glands ကိုရည်ညွှန်းသည်) ။ ကင်ဆာသာမကဘဲအဆင့်မြင့်ဟော်မုန်းစည်းမျဉ်းများ၊ testosterone ဟော်မုန်းထိန်းချုပ်မှုစသည်တို့တွင်အသုံးပြုသည်။ Triptorelin Acetate သို့မဟုတ် Triptorelin Injection ကိုလူသိများသောကြောင့်ယနေ့ကမ္ဘာတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ Triptorelin Acetate ထုတ်လုပ်သူကသင်ဆေးမသောက်မီဆရာ ၀ န်၏ထင်မြင်ချက်ကိုယူရမည်ဟုအကြံပြုသည်။
2. Triptorelin Acetate အဘို့အဘယ်သို့သုံးထားသလဲ?
Triptorelin Acetate140194-24-7 အများဆုံး Trelstar ၏ Triptorelin ဆေးထိုးအဖြစ်လူသိများသည်။ Triptorelin ဆေးထိုးအဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသရာတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ Triptorelin ဆေးထိုးလည်းကလေးတွေအတွက်ဟော်မုန်းကိုထိန်းညှိရန်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ တစ်ဦးကသုံးစွဲခြင်းကိစ္စတွင်ကလေးတစ်ဦးသည်သူ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်တက်ကြွဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏ဟော်မုန်းတစ်ခုအစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်ဇာတ်စင်မှဦးဆောင်မတိုင်မီလွန်းမကြာမီဖြန့်ချိကြသောအခါ, Triptorelin ဆေးထိုးဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုလျော့ချဖို့အသုံးပြုကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဆေးပညာ၏ခွဲခြားအောက်မှာလာ gonadotropin လွှတ်ဟော်မုန်း GnRH အဖြစ်အတိုကောက်။ ဒါဟာပုံမှန်အတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနှုန်းထက်ပိုမြန်နှင့်အတူကလေးများထိန်းချုပ်ထားအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းများအတွက်, Triptorelin ဆေးထိုး restore စမ်းသပ်မှုများအလွန်အကျွံလျှို့ဝှက်ချက်များကိုလျော့ချဖို့အသုံးပြုသည်။ testosterone အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားအပေါ်အခြေခံပြီးအကြံပြုမယ်ရာတွင်လည်းများစွာသောအခြားအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။ တစ်ခုမှာသင်ကအသစ်မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကောငျးစှာအထူးသဖြင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်သည်လူသားများတွင်အလားတူ functional ဖြစ်စေမဖွစျစခွေငျးငှါမူးယစ်ဆေးအဖြစ်သောက်သုံးသောဂရုစိုက်ရပေမည်။
Triptorelin Acetate ကိုအမျိုးသမီးများရင်သားကင်ဆာကိုကုသရန်လည်းအသုံးပြုသည်။ Triptorelin Acetate ဆေးထိုးခြင်းသည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) အားလုံးကိုမဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကင်ဆာဆဲလ်များပြန့်ပွားမှုကိုရပ်တန့်စေရန်အတွက်ဟော်မုန်းများကြီးထွားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်နှေးကွေးသောရလဒ်များရှိသည့်ကုသမှုဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံမှန်ဆေးစစ်မှုများကိုဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမမေ့ပါနှင့်၊ မသန်မစွမ်းမှုတစ်ခုခုကိုပြင်းထန်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမပြမီသင့်ဆရာဝန်ကိုအကြောင်းကြားရမည်။
ဆေးထိုးခြင်းသည်သွေးကြောများမှတစ်ဆင့်ကူးစက်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ၎င်းသည် testosterone ဟော်မုန်းကဲ့သို့သောကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်သည့်ဟော်မုန်းများကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဟော်မုန်းများနှင့်ဟော်မုန်းများထုတ်လွှတ်သည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအပေါ်အဏုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်အန္တရာယ်များနိုင်သော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားအပေါ်မူတည်သည်။ လူသား၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆေးညွှန်းတစ်ကြိမ်မှရလဒ်ကိုမပြပါ၊ သို့သော်သင့်ဆရာဝန်မှသတ်မှတ်ထားသောအထူးဆေးပမာဏသည်ကြီးထွားမှုစည်းမျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
3. ဘယ်လိုမျိုး Triptorelin Acetate wသင်တို့အပေါ်မှာ ork?
အဆိုပါ Triptorelin ဆေးထိုး (Trelstar), မူးယစ်ဆေးအဆိုပါ endocrine ဂလင်းအပေါ်ပြုမူခြင်းနှင့်ကင်ဆာဆဲလ်များကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဒါကြောင့်အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာမှကြွလာသောအခါ, ကင်ဆာဆီးကျိတ်ဂလင်းကနေအခြားအကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကူးပြန့်နှံ့ခဲ့သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆဲလ်တွေအချို့ကိစ္စများတွင်လည်းသင့်ရဲ့ rectum, အရိုးများနှင့်ဆီးအိမ်ဖို့သင့်ဖဲစနစ်ကတဆင့်ရွှေ့ပါ။ ဤနေရာတွင် Triptorelin Acetate အပြီးအပိုင်အားလုံးကင်ဆာဆဲလ်များကိုမဖယ်ရှားအတွက်ကူညီပေးသည်, Triptorelin Acetate ကင်ဆာအတွက်ကူညီပေးသည်သျောအဘယျမှုနှုန်းမှာသင့်ရဲ့အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားအပေါ်မှီခိုသည်။
သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ဟော်မုန်းအတွက်လျှော့ချရေးစောင့်ကြည့်စတင်သည်လျှင်, ကြောင်း Triptorelin Acetate အလုပ်ဖြစ်သင့်သည်။
သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ကင်ဆာဆဲလ်များပြန့်ပွားစောင့်ကြည့်စတင်သည်ရပ်တန့်လျှင်ထို Triptorelin Acetate အလုပ်ဖြစ်သင့်
သင်သည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အတွက်ပြောင်းလဲမှုစောင့်ကြည့် start လျှင်, ကြောင်း Triptorelin Acetate အလုပ်ဖြစ်သင့်
ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွက် Triptorelin Acetate စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်သည့်အခြားဆေးဝါးများကဲ့သို့တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဖြစ်ပါသည်, ကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဒေသများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ခွငျးအားဖွငျ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ရောဂါပျောက်ကင်းဆီသို့ဦးတည်ဆိုရမှာပါ။ သငျသညျတခါထပ်သောက်သုံးသောနှင့်တိုင်းဆက်တိုက်ဆေးဝါးအကြားကာလအလွန်သတိထားဖြစ်ရမည်။
အတိမ်အနက်အတွက်ရှင်းပြမယ်ရသောအင်တာနက်အပေါ် Triptorelin Acetate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။ Triptorelin Acetate ထုတ်လုပ်သူထုတ်ကုန်များ၏အကူအညီစာမျက်နှာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်အကျဉ်းချုပ်ကိုရိုက်ထုတ်။
4. အဘယ်သို့ငါ Triptorelin Acetate ကိုသုံးပါသင့်သလဲ
Triptorelin Acetate (140194-24-7) ကင်ဆာ (ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ) ကုသမှုနှင့်ဟော်မုန်းများ၏ကြီးထွားစည်းမျဉ်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ Triptorelin Acetate ဆေးကိုသင်၏ဆရာဝန်ကဆေးထိုးပုံစံတစ်မျိုးအနေဖြင့်ပေးသည်။ များသောအားဖြင့်ဆေးထိုးခြင်းသည် ၄ ​​ပတ်တိုင်းတွင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည် (သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်) ။ မလိုအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သင်သောက်သုံးသောအချိန်တွင်သတိထားရပါမည်။ မင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်မင်းရဲ့ရက်စွဲကိုပြက္ခဒိန်ထဲမှာအမှတ်အသားပြုပြီးအကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက် Triptorelin Acetate ထိုးဆေးကိုအချိန်မှန်မှန်သောက်ရန်အကြံပေးသည်။ ဒီဆေးကိုသုံးနေစဉ်ဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အခိုးအငွေ့ဖြစ်သည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပြီးသင်၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် မူတည်၍ အတူတကွလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရက်သတ္တပတ်၏ပထမစုံတွဲအတွက်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ မကြာခဏထုံခြင်း၊ အရိုးနာခြင်းသည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလက္ခဏာအနည်းငယ်သာရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည် ဆက်လက်၍ နာကျင်မှုများပြားလာပါကသင်၏ဆရာဝန်အားပြောပြရမည်။ အန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိသော်လည်းဆေးအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်နေစဉ်တွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။ မထိတ်လန့်မိပါစေနှင့်၊ ဆေးသည်သင့်အပေါ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသင့်ဆရာ ၀ န်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ ဆေးဝါးကာလအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆေးဝါးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆရာဝန်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အသုံးပြုမှုကိုသင်၏အထူးကျွမ်းကျင်သူမှသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဆေးဝါးသောက်သုံးသောအချိန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကာလကိုမဆိုမထိမိရန်သတိပြုပါ။
များသောအားဖြင့် Triptorelin Acetate သည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသို့မဟုတ်အစောပိုင်းကြီးထွားမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများခံစားနေရသောလူများကအသုံးပြုသည်။ သူတို့သည်ဆေးဝါးကိုအချိန်တိကျချိန်တွင်ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်းသူတို့သိသင့်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာဝန် / အထူးကုဆရာဝန်နှင့်အခါအားလျော်စွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အများဆုံးလျစ်လျူရှုခံရသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသည်ကြီးမားသောပြintoနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤဆေးဝါးများကိုမည်သည့်ဆေးဝါးမဆိုအသုံးမပြုမီဂရုပြုရမည်။ Triptorelin Acetate ဆေးထိုးခြင်းသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကင်ဆာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ လူနာသည်စိတ်တွင်ထားရမည်။ ၎င်းသည်ကင်ဆာဆဲလ်များ၏ကြီးထွားမှုကိုရပ်တန့်စေသောဟော်မုန်းများကိုရပ်တန့်စေသည်။ ဤဆေးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကင်ဆာကိုမဖျက်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ကြီးထွားရန်ခွင့်မပြုခြင်းဖြင့်ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန်ကုသသည်။ သင်ရှာဖွေသင့်သည် Triptorelin Acetate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ တစ်သတ်မှတ်တဦးတည်းရှိရင်တောင်အင်တာနက်ပေါ်မှာ Triptorelin Acetate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှာဖွေနေအတွက်မှားယွင်းတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှလည်းမရှိ။
6. Triptorelin Acetate သောက်သုံးသော
Triptorelin Acetate သောက်သုံးသောကိစ္စကို၏လေးနက်မှုနှင့်လူနာများ၏ကျန်းမာရေးအပေါ် baed ကွဲပြားခြားနားသည်။ Triptorelin Acetate သောက်သုံးသောကိုလည်းလူနာများ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Triptorelin ဆေးထိုးသို့မဟုတ် Trelstar ဆေးသောက်သုံးသောမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားသောလျှင်အလွန်ထိရောက်သောမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
တလတွင်နှေးကွေး-လွှတ်ပေးရန်ဆေးဘို့, Trelstar 3.75ml အနေနဲ့ဆေးထိုး၌ရှိသကဲ့သို့မြုံရေရေစက်အတူ 2mg မှာ dosed ခံရဖို့အကြံပြုသည်။ ဒါကတစ်လဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတစ်ဦးအသားထိုးဆေးဖြစ်ရပါမည်။ အဆိုပါ 3.75mg Triptorelin Acetate + 2ml ရေတစ် peptide အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကြွက်သားတစ်ရှူးများ၏သွေးလွှတ်ကြောများတွင်အသွေးအားဖြင့်သောက်သုံးသောသွားလာမှုနှင့်ရလဒ်များအတွက်ဟော်မုန်းနှုန်းကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
ဤသည်သောက်သုံးသောတစ်ဦး 21 gauge အပ်သို့မဟုတ် Single-ထိုးပေးပို့မှုစနစ်သုံးပြီးအမှုကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။
သုံးလနှေးကွေး-လွှတ်ပေးရန်ဆေးဘို့, Trelstar 11.25ml အနေနဲ့ဆေးထိုး၌ရှိသကဲ့သို့မြုံရေရေစက်အတူ 2mg မှာ dosed ခံရဖို့အကြံပြုသည်။ ဒီအတိုင်းသုံးလကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတစ်ဦးအသားထိုးဆေးဖြစ်ရပါမည်။ အဆိုပါ 11.25mg Triptorelin Acetate + 2ml ရေတစ် peptide အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကြွက်သားတစ်ရှူးများ၏သွေးလွှတ်ကြောများတွင်အသွေးအားဖြင့်သောက်သုံးသောသွားလာမှုနှင့်ရလဒ်များအတွက်ဟော်မုန်းနှုန်းကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ဤသည်သောက်သုံးသောတစ်ဦး 21 gauge အပ်သို့မဟုတ် Single-ထိုးပေးပို့မှုစနစ်သုံးပြီးအမှုကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ခြောက်လနှေးကွေး-လွှတ်ပေးရန်ဆေးဘို့, Trelstar 22.5ml အနေနဲ့ဆေးထိုး၌ရှိသကဲ့သို့မြုံရေရေစက်အတူ 2mg မှာ dosed ခံရဖို့အကြံပြုသည်။ ဒီအတိုင်းခြောက်လဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတစ်ဦးအသားထိုးဆေးဖြစ်ရပါမည်။ အဆိုပါ 22.5mg Triptorelin Acetate + 2ml ရေတစ် peptide အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကြွက်သားတစ်ရှူးများ၏သွေးလွှတ်ကြောများတွင်အသွေးအားဖြင့်သောက်သုံးသောသွားလာမှုနှင့်ရလဒ်များအတွက်ဟော်မုန်းနှုန်းကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ဤသည်သောက်သုံးသောတစ်ဦး 21 gauge အပ်သို့မဟုတ် Single-ထိုးပေးပို့မှုစနစ်သုံးပြီးအမှုကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ Triptorelin Acetate သောက်သုံးသောသင့်ဆရာဝန်များအကြံဉာဏ်ကိုယူဒီနှင့်၎င်း၏ပိုကောင်းတူသောအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
သင်သည်မည်သည့်အဆင်ပြေသောက်သုံးသောကာလအတွင်း Triptorelin Acetate ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးအခွင့်အာဏာဆရာဝန်များကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးနောက်အသုံးပြုရန်ရမယ်သူသင်ဤဆေးပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာ။
7. Triptorelin Acetate သုံးပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
သင်မူးယစ်ဆေး Triptorelin Acetate သုံးပြီးသင်ပထမဦးဆုံးဒီဆေးဝါးကိုစတင်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီယာယီသီးခြားဟော်မုန်းကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါမစတင်လာတဲ့အခါအဲဒီကုသလျက်ရှိသည့်အခြေအနေများနှင့်အလားတူအခြေအနေရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်ပေမယ့်အလွယ်တကူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်သောအခြားလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Trelstar ဆီးကျိတ်ဒေသနှင့်အတူဆကျဆံသကဲ့သို့ဆီးသွားခြင်းအတွက်ဆီးပိတ်ဆို့နာကျင်ဆီးသွားခြင်းနှင့်အသွေးလေးနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလည်း overdosage ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အသစ်မိတ်ဆက်မူးယစ်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တည်ဆောက်အဖြစ်သူတို့ယာယီဖြစ်လိမ့်မည်။ Triptorelin Acetate ထုတ်လုပ်သူ သင့်ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။
Triptorelin Acetate ဟော်မုန်းအတွက်အဓိကလျော့နည်းမှု, သင်၏ကင်ဆာပျံ့နှံ့အတွက်ကျဆင်းခြင်းလည်း Triptorelin Acetate ရလဒ်များကို။ သင်တို့သည်ဤ Triptorelin Acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဆိုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်ဤ Triptorelin Acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဆိုတှေ့လြှငျဒါဟာချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ် သာ. ကောင်း၏:
ချောင်းဆိုးအတွက်ရရှိလာတဲ့ချမ်းခြောက်သွေ့လည်ချောင်းထဲမှာရရှိလာတဲ့ continuous နှာချေ
မြင့်မားတဲ့ကို BP နဲ့သကြားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူနှလုံးခုန်နှုန်းအတွက်တိုးလာ
အသက်တော်အပေါ် Fruity အနံ့
ဤရွေ့ကား Triptorelin Acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအများစုဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသူများကိုမဆိုအခြားအခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်. အဖြစ်ကောင်းစွာပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ သငျသညျနိုးနိုးနှင့်နောက်ထပ်အကူအညီများမဆိုအဘို့သင့်ဆရာဝန်အစီရင်ခံရန်အကြံပြုပါသည်။
သင်ဤဆေးကိုယူပြီးနေကြသည်နေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုသွေး, ဆီးအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သောအရည်များမှတစ်ဆင့်အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသွားလာမှုဒါဟာဆေးဝါးလျှက်လူနာ 48 နာရီအနည်းဆုံးသောဤအရည်မဆိုမထိသင့်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဆေးသုံးနေစဉ် (စောင့်ရှောက်သူများအတွက်) ရော်ဘာလက်အိတ်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
Triptorelin Acetate ရောဂါပျောက်ကင်းဘို့အကောင်းဆုံးမဖြစ်ရသောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတုံ့ပြန်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်အသင်မှတဆင့်သွားကြသည်အားလုံးလက်ရှိဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြရပေမည်။
8. Triptorelin Acetate ညာဘက်အကြှနျုပျအဘို့ဖြစ်သနည်း
Triptorelin Acetate သည်သင်ဟော်မုန်းဆိုင်ရာပြfromနာများခံစားနေရလျှင်သင့်အတွက်မှန်ကန်သည်။ Triptorelin Acetate ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများမှအပပြtheနာရှိသူမည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဆရာ ၀ န်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသောက်သုံးရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုသူကောင်းကောင်းသိလိမ့်မည်။ မည်သည့်ဆေးနှင့်ဆိုင်သောပြissueနာကိုမဆိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်အရင်ဆွေးနွေးသင့်ပြီး၊ ဆေးဝါးတစ်မျိုးတည်းကိုသုံးသောအခြားဆေးများနှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်။ Triptorelin Acetate သည်ရောဂါပျောက်ကင်းစေပြီး အကယ်၍ သင်ကလိုချင်သူဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သည်။ Triptorelin Acetate အမှုန့် (သို့) Trelstar၊ ဤအရာသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ Triptorelin Acetate အမှုန့် ဆေးထိုးခြင်းထက်အတန်ငယ်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆေးထိုး Triptorelin Acetate အမှုန့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုပြသသည်။
9. ငါ Triptorelin Acetate ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ?
သငျသညျဆေးညွှန်းအပေါ်သို့သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများစတိုးဆိုင်များမှာ Triptorelin Acetate ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ သငျသညျမဆိုငျဌာနခှဲသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Phcoker သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ Triptorelin Acetate ရဖို့။ Triptorelin Acetate ကိုမ ၀ ယ်ခင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကိုအမြဲစစ်ဆေးပါ။